OMG! भर्खरै दाङकाे लमहीबाट अायो यस्तो दुःखद खबर – PathivaraOnline
Home > समाचार > OMG! भर्खरै दाङकाे लमहीबाट अायो यस्तो दुःखद खबर
लमही, बबइ गाउँपालिका ४ हसनापुरमा आमाछाेरी मृत फेला परेका छन् । हसनापुरका २४ बर्षिया सरस्वती पुनमगर र उहाँकि ३ बर्षिया छाेरी कृतिका पुनमगर अाज मृत फेला परेकाे इलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुरले जानकारी दिएकाे छ ।
स्थानिय सितलगाैरा सामुदायिक वनमा मृत फेला परेका प्रहरी निरिक्षक डाक्टरप्रसाद चाैधरीले जानकारी दिनुभयो । छाेरी सहित यहि असोज ३ गतेमाइतीघर राेल्पा जान भनेर हिडे पनि लामाे समयसम्म सम्पर्क नअाएकाे आफन्तहरूले बयान दिएको प्रहरीले जानकारी दिएकाे छ ।
स्थानियले हिजो बेलुकि ५ बजेतिर शब देखेपछि प्रहरीलाइ खबर गरिदिएका थिए । शव सड्ने अवस्थामा रहेकाले उनिहरूको ४, ५ दिन अगाडि नै मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रहरीकाे अनुमान छ । अाफन्तले हत्या भएकाे हुन सक्ने भन्दै शव उठाउन मानेका थिएनन् ।
भारतले नेपालकाे भूमि हडप्न खोजेपछि पाकिस्तानीहरूले चलाए #BackOffIndia ट्रेण्ड! – ट्विट सहित हेर्नुहाेस्
हस्पिटलको बेडमा मृत्युसँग लडिरहेको चेलीले सबै नेपाली सामु दोस्रो जन्मको भिक माग्दै – कृपया सके सहयोग नसके शेयर गर्नुहोला(तस्विर)
कोहलपुर घटनाको वास्तविकता: विद्यार्थी कि चिएपछि यसरी भयो कोहलपुरमा तनाव (भिडियो सहित)